Diyopost.com :: ‘गृहमन्त्रीलाई आइजीपिको फूली’ प्रकरण : मिडिया विज्ञ भन्छन्,‘भोली राष्ट्रपतिलाई विकिनी लगाइदिने?’ ‘गृहमन्त्रीलाई आइजीपिको फूली’ प्रकरण : मिडिया विज्ञ भन्छन्,‘भोली राष्ट्रपतिलाई विकिनी लगाइदिने?’ - Diyopost.com
काठमाडौं । आइतबार राजधानीबाट प्रकाशित हुने एक साप्ताहिकले गृहमन्त्री राम बहादुर बादललाई ‘घटुवा गर्दै’ आइजीपिको फूली लगादियो । गृह प्रशासनको बागडोर सम्हालेको ६ महिना नबित्दै बादलमाथि लगाइएको यो पहिरनबारे विभिन्न टिप्पणी समेत भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पत्रिकाका प्रकाशक र सम्पादकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत बढ्दो छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रकै विज्ञहरुले समेत ‘हिमाल साप्ताहिक’को पत्रकारिताको शैलीमाथि टिप्पणी गरेका छन् । दियोपोस्ट डटकमले त्रिभूवन विश्वविद्यालयका प्रध्यापक तथा आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभागका प्रमुख प्रवलराज खरेल र अनूभवि पत्रकार तथा घटना र विचार साप्ताहिकका सम्पादक देव प्रकाश त्रिपाठीसँग यस विषयमा छोटकरीमा अन्तर्वार्ता गरेको थियो ।
प्रध्यापक आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विभाग, त्रिभूवत विश्वविद्यालय
विभिन्न प्रजातान्त्रिक समाजमा विभिन्न अभ्यास देखिन्छ । हामीले अरु क्षेत्रमा जुन किसिमको आचरण अपनाउनुपर्छ भनेर राखिने आधारलाई मान्यता राख्नुपर्छ । कानूनी हिसाबले त्यसरी प्रकाशन गर्नु मिल्न सक्छ । तर व्याबहारिक हिसाबले हाम्रो सामाजिक मान्यताको हिसाबले त्यसरी प्रकाशन गर्न मिल्दैन । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनिएको छ । आचार संहिता हामीले आफै बनाएको हो । कुनैपनि सेन्सेटिभ युनिफर्ममा गृहमन्त्री राख्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यतिमात्रै होइन एकै प्रकारको संस्था भित्रको आफ्नो मान्यजनलाई त्यसरी गर्नु हुँदैन । यो त नकरात्मक किसिमले गरिएको हो । त्यसरी प्रस्तुत गर्दा आफैलाई चित्त नबुझ्नु पर्ने हो । हिमाल संस्थाकै आदर्णीय व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भने उहाँलाई पनि त्यसै गरी राख्नु उचित हुन्छ र ?
बाहिरको उदाहरण दिने हो भने त नराम्रो उदाहरण धेरै छन् । हिटलरको दिएपनि हुन्छ । राम्रो कुरा राख्यो भने फाँसिजमको पनि एउटा राम्रो, नाजिजमको पनि एउटा राख्यो भने राम्रो बन्छ । त्यसकारण हामीले उदाहरण तिर जानु हुँदैन । यस्तोमा हामीले मानेको संस्थाहरुले सक्रिय भएर प्रश्न उठाउनु पर्छ । संस्थाको हिसाबले प्रेस काउन्सिल हो । प्रेस काउन्सिलले यो विषय उठाउँछकी उठाउँदैन भन्ने विषयमा मलाई शंका लाग्छ । सक्रियता नअपनाउन पनि सक्छ । मुद्दा नगरेपनि ‘यो के हो ?’ भनेर प्रश्न र छलफल गर्न सक्छ । यस्तो विषयमा छलफल नहुने हो भने यत्तिकै चढ्दै जान्छ । यो चढ्दै गयो भने यसले राम्रो गर्दैन अन्तत्वगत्वा । नत्र भने भोली राष्ट्रपतिको जस्तो पनि आउँन सक्छ । विकिनी लगाएर राखिदिनसक्छ । के फरक पर्यो र ।
हाम्रो सामाजिक मान्यता अनुसार यसरी प्रकाशन गर्न मिल्दैन । हामीलाई असर गर्ने व्यक्तिहरुका बारेमा यसरी प्रचार गर्नु मिल्दैन । उदाहरणका लागि कनकमणी जी नै हुनुहुन्थ्यो होला रे अहिले । उहाँलाई नै एउटा पगरी लगाइदिएर प्रकाश गरियो भने उहाँलाई रुचीकर हुँदैन थियो होला । मलाई त्यो रुचीकर हुँदैन ।
आफ्नो बारेमा कसैले नाक बङ्ग्याएर कार्टुन राख्यो भने त चित्त बुझ्दैन । म आफै सेन्सेटिभ हुन्छु । पत्रकार आफै सेन्सेटिभ हुन्छ । अनि अरुको बारेमा यस्तो आयो भने कसरी चित्त बुझ्छ ? म गृह मन्त्रीको फ्यान वा कोही पनि होइन । समग्रमा यो राम्रो होइन । मैले राष्ट्रपतिलाई वा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेँ भने टेबुलमा खुट्टा राख्न हुन्न भन्ने छैन । केही दिनअघि प्रम ज्यूले सम्पादकहरुलाई बोलाउनु भएको थियो । मैले त्यो बेला टेबुलमाथि खुट्टा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई देखाएँ भने कानुनले हुन्न भनेको छ र ? तर त्यसो गर्न पाइन्छ त ? कुरो त्यहि नै हो । यो विषयमा पत्रकार महासंघ र मुख्यत प्रेस काउन्सिलले बोल्नु पर्ने हो । प्रेस काउन्सिलले यस्तो विषय उठाएको देख्दिनँ । अहिले पनि होला होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
कानुनले कसरी ब्याख्या गर्ला न्यायधीशलाई थाहा होला । तर फोटो विगार्न पाईंदैन । फोटो विगार्नु पत्रकारिता होइन । यो मेरो मात्रै विचार होइन सर्वमान्य सिद्धान्त हो । कार्टुन भनेको फरक कुरा हो । म सत्तामा छैन । सत्तावालाले भोली बोलाएर टिका लगाइदेला भन्ने छैन । मैले हिमालका साथीहरुलाई चिनेकै छु । मैले यसो भन्ने वित्तिकै हाम्रो विराधी रहेछ भन्ने संस्कार बनेको छ । समग्रमा भन्दा प्रेस काउन्सिलले पहिलेदेखि नै सशक्त भूमिका खेल्न नसकेकोले बिग्रिएको हो ।
सम्पादक घटना र विचार साप्ताहिक
यसरी गलत नियतले कसैको बदनाम गर्ने प्रस्तुती प्रीन्टेड फर्ममा होस वा डिजिटल माध्यमबाट होस् गरिँदैन । अभ्यासको हिसाबले कहिलेकाँही अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा खास–खास अवस्थामा खास–खास व्यक्तित्वको कुनै कुरालाई सन्देश दिनुपर्ने भयो भने केही प्रकारले तोडमोड गरेको पाइन्छ ।
यहाँ फोटो सप गरिएको देखिन्छ । माया, इन्डिया टुडे र न्युज विकमा खास खास अवस्थामा चाहीँ केही चेन्ज गरेको देखिन्छ । यो अभ्यासमा हुँदै नभएको होइन । हिमाल साप्ताहिकले गिरिजा प्रसादलाई श्रीपेच लगाएको, पुष्पकमललाई सेनापतिको टोपी लगाएको थियो । तर, सन्दर्भ हेरेर हुन्छ । असान्दर्भिक बनाएर विकृत ढंगले प्रस्तुत गर्ने कुरा ग्राहय मानिँदैन । तर खास कुनै इश्यु विशेषमा केही बदल्ने कुरा विश्वव्यापी रुपमै अभ्यासमा आएको देखिन्छ ।
दुई मिडियाको संयोग होइन
नेपाल र हिमालको संयुक्त रुपमा यो स्टोरी प्रकाशनमा संयोग नै मिलको होइन । किन भने नेपालको केही मिडियामा हरेक पटक एक प्रकारको श्याल हुँइया शुरु हुन्छ । ६/७ वटा मिडियाले एकै पटक सल्लाहले नै गरेको होकी जस्तो देखिन्छ । लोकमान प्रकरण, पूर्व प्रन्या गोपाल पराजुली प्रकरणमा यी मिडियाहरु सँगै थिए । उहाँहरुले संगठित ढंगले मिसन बनाएर गरेको भन्न मिल्छ कतिपय सन्दर्भमा । संयोग मात्रै होइन । संयोग नै हो भने यो आश्चर्य जनक संयोग हो किन भने संयोगको फ्रीक्वेन्सी धेरै छ ।
यहाँ आन्तरिक राजनीति पनि छ । राम बहादुर थापाजी गृहमन्त्रीको पदमा हुनुहुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री प्रति ज्यादा लोयल हुनुहुन्छ की पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रति बढी लोयल हुनुहुन्छ । हुनुपर्ने कतापट्टि हो भन्ने प्रश्न त छदैँछ । आन्तरिक द्वन्दको परिणाम पनि यो हुनसक्छ ।
नयाँ आएको अपराध संहिताको कानुन हेर्दा यो प्रकरणमा कानुन आकर्षित हुने देखिन्छ । तर सरकारले त्यसरी मिडियामाथि कानुनको डण्डा लगायो भने सन्देश राम्रो जाँदैन ।
अहिले जुन प्रकारले अपराध संहिता आएको छ । यसको परिक्षण पनि हो । यो कार्यान्वयन गर्न सक्छकी सक्दैन भन्ने कुरा पनि यसबाट जोडिएको छ । नेपालमा जुन कुरालाई रोक्न खोज्यो त्यही कुरा गर्ने र गर्न खोज्ने प्रवृति पनि छ ।
हाम्रो कानुनले सोसियल मिडिया र मास मिडियालाई डिफाइन गर्न सकेको छैन । आम सञ्चार कानुन आएपछि यो विषयमा स्पष्ट होला । आम सञ्चार जसले चलाएको भएपनि रेस्पोन्सिबल मिडिया भन्नुपर्छ । कति रेश्पोन्सिबल छ छैन त्यो बेग्लै कुरा हो । अहिले नै बादललाई यसरी सिंगार पटार गर्नुपर्ने जरुरी थियो की थिएन त्यो बहसको विषय हो । अहिलेको कानुनको परिक्षण भनेको यो दुई वटा पत्रिकामाथिको प्रस्तुती हो ।
हिमाल साप्ताहिक कभर प्रकरण : कनकमणी दीक्षितलाई पक्राउ गर्ने गृहमन्त्रालयको ‘गोप्य’ तयारी !